Accueil > Gazetin'ny nosy > Diplomasia : Matahotra ny Frantsay i Djacoba Tehindrazanarivelo
Diplomasia : Matahotra ny Frantsay i Djacoba Tehindrazanarivelo
Eo anoloana ny fikasana hamonoana ny filoham-pirenena Malagasy Andry Nirina Rajoelina ny 21 jolay 2021, ka nahavoasambotra ny atidohan’izany dia ireo frantsay roalahy, ny kapiteny Paul Maillot Rafanoharana sy ny kolonely Philippe Marc François, izay samy teran-tany frantsay avokoa. Mangina tsy heno mihitsy ny lehiben’ny diplaomasia malagasy Djacob Tehindrazanarivelo.
Amin’ny toe-javatra toa izao dia tokony hanontaniana ny hevitrin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ka andraikitrin’ny minisitrin’ny raharaham-bahiny izany. Eo amin’ny raharaha toa izao dia tokony ho fantatra ihany ny tenin’ny fanjakana frantsay satria olony izay mpiray tanindrazana aminy no nahavanon-doza sy fikasana hanongana fanjakana toa izao.Miandry izay ho fahitan’ny ambasadaoron’i Frantsa eto Madagasikara ity raharaha ity ny vahoaka Malagasy. Ilaina dia ilaina ihany koa ny fahalalana ny hevitrin’ny fanjakana frantsay.
Iarahana mahita hatramin’izay fa raha vao misy “kidnapping” mihantra amin’ny teran-tany frantsay eto Madagasikara dia poa toa izay dia mihetsika ny fanjakana frantsay. Mandefa mpisolovava sy mpanao fanadihadiana avy any frantsa mihitsy izy ireo.
Anjaran’ny minisitrin’ny raharaham-bahiny malagasy ny manontany izany ary milaza izany amin’ny vahoaka Malagasy. Tsy hatoro izany izy fa ilaina dia ilaina ny fahalalana izany. Zavatra tsy dia manao ahoana loatra aza no mitranga ataon’ny Malagasy dia mangataka fanazavana amin’izany ireo ambasadaoro sy maso ivoho iraisam-pirenena.
Hita fa matahotra mafy ny fanjakana frantsay ingahy Djacoba Tehindrazanarivelo ity mba tsy hilazana hoe tsy mandray ny andraikiny. Tsy mahagaga raha toa ka lalaovin’ny vahiny i Madagasikara.Malemy tanteraka isika noho izany fahatahorana izany.
Tamin’ny voalohan’ity herinandro ity dia nanampy ny miaramilany amin’ireo nosy Malagasy antsoina hoe “Iles Eparses” ny frantsay. Dia mbola mangina sy tsy miteny hatrany ingahy Djacoba Tehindrazanarivelo. Tena lalaovin’ny frantsay tanteraka ny firenena Malagasy noho izany ary hita taratra amin’izao raharaha izao ny tsy fandehanan’y diplaomasia Malagasy.